Osmosis filter maka akwarium, ihe niile ịchọrọ ịma. Kedu nke ị ga -azụta? | Nke azụ
Osmosis filter maka akwarium, ihe niile ịchọrọ ịma
Natalia Cerezo | | Ngwa
Otu nnukwu ajụjụ maka neophyte ọ bụla na aquariums metụtara ihe kacha mkpa azụ na -akwagharị, mmiri. Ọ bụ ya mere ihe nzacha osmosis aquarium bụ nnukwu isiokwu nke arụmụka yana nnukwu ụzọ iji mee ka azụ gị nwee ahụ ike.
Ọzọ anyị ga -ekwu maka ya ụdị isiokwu niile metụtara nzacha osmosis maka akwarium, dịka ọmụmaatụ, gịnị bụ mmiri osmosis, kedu ihe dị iche na osmosis na -atụgharị ma ọ bụ uru dị na ịnweta nzacha dị ka nke a na akwarium anyị. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na isiokwu a, anyị na -akwadokwa ka ị gụọ akụkọ a ọzọ gbasara Eheim iyo.
1 Ihe nzacha osmosis kacha mma maka akwarium
2 Gịnị bụ mmiri osmosis maka akwarium?
3 Kedu ihe nzacha osmosis dị na akwarium?
3.1 Kedu ka osmosis filter si arụ ọrụ?
4 Ogologo oge ole ihe nzacha mmiri osmosis na -adị?
5 Uru dị na ịnweta nzacha osmosis maka akwarium
6 N'ọnọdụ ndị ka m kwesịrị iji ihe nzacha akwarium osmosis?
7 Ihe nzacha osmosis ọ bụ otu ihe nzacha osmosis na -atụgharị?
8 Ị nwere ike ịme osmosis maka akwarium a kụrụ?
Ihe nzacha osmosis kacha mma maka akwarium
Sistemụ mmiri ...
DEPURTEK Osmosis na -atụgharị ...
Sistemu 001737 Sistemu ...
Gịnị bụ mmiri osmosis maka akwarium?
Iji ghọta ihe mmiri osmosis maka akwarium, anyị ga -ebu ụzọ ghọta ihe mmiri na -abata n'ụlọ anyị dị. Ya mere, enwere ike ekewa mmiri dị ka ihe na -adịghị ike ma ọ bụ sie ike, dabere na ntinye nke nnu ịnweta ọ nwere. Ka ọ na -esiwanye ike, ọ na -emebi ahụike nke azụ gị… na ọkpọkọ gị. Dịka ọmụmaatụ, n'obodo m enwere oke nzu dị na mmiri nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe dị mkpa iji wụnye ihe na -eme ka mmiri dị nro ma ọ bụrụ na ịchọghị ịpụ ọkpọkọ kwa abụọ ma ọ bụ atọ. Ọbụna bọlb nọ na mmiri ịsa ahụ jupụtara na okwute lime!
Kedu ka ị ga-esi were A naghị atụ aro mmiri dị otú ahụ, ọbụlagodi obere maka azụ gị. Nke a bụ mgbe mmiri osmotic batara na foto a.
Mmiri Osmosis, ma ọ bụ mmiri osmotized, bụ mmiri nke ewepụrụ nsị na adịghị ọcha niile na ya. ka nsonaazụ ya bụrụ mmiri "dị ọcha", nke kacha mma, nke akwadoro nke ukwuu maka azụ gị ibi ndụ obi ụtọ na ahụike, ihe dị mkpa ọkachasị n'ụdị anụmanụ a, ebe ọ bụ na mmiri nke ya bụ ebe obibi ya, ya mere ọ dị mkpa ka anyị mee ka ọ dị ọcha dịka o kwere mee. Na mgbakwunye, anụmanụ ndị a na -enwe mmetụta nke ukwuu na pH nke mmiri yana, ebe mineral na adịghị ọcha ndị ọzọ nwere ike ịgbanwe ya, ọ ka mma ịnwe mmiri kacha mma.
Ọ bụ otu A na -enweta usoro a site na nzacha osmosis (nke anyị ga -ekwu maka ya n'okpuru) na ọ dịghị mkpa ịgbakwunye kemịkal ọ bụla na mmiri.
Kedu ihe nzacha osmosis dị na akwarium?
Ihe nzacha osmosis n'ime akwarium na -enye ohere nke ahụ, iji nweta mmiri dị ọcha pụrụ iche. Dịka anyị kwuru n'elu, a naghị enweta nke a site na ịtinye kemịkal ọ bụla, kama site na iji ncha mmiri mee ya, n'ụzọ doro anya, ihe nzacha osmosis.
Kedu ka osmosis filter si arụ ọrụ?
N'ụzọ bụ isi, aha ya egosila etu osmosis filter si arụ ọrụ, ebe ọ bụ kpọmkwem nke ahụ, ụdị akpụkpọ ahụ na -enye ohere ka mmiri gafee mana na -ejigidekwa adịghị ọcha nke anyị kwuru n'elu ya nwere olu karịrị micron ise. Ngwaọrụ ahụ na -etinyekwa nrụgide n'akụkụ abụọ nke akpụkpọ ahụ iji nweta ụdị mmiri abụọ: osmotized, na -enweghị ntụpọ niile, yana mmetọ, nke ihe ndị a lebara anya na ya.
Ọzọkwa, dabere na onye nrụpụta enwere ike ruo ihe nzacha ise dị iche iche iji weghara adịghị ọcha niile enwere ike. Dịka ọmụmaatụ, ụzọ a na -esikarị enyocha mmiri gụnyere:
Un mbụ nyo nke a na -eji ewepu ihe ndị kacha maa abụba, dị ka ụwa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ siri ike dị na mmiri.
El ihe nzacha carbon Ọ na -enye ohere iwepu obere ahịhịa, dị ka chlorine, nsị ma ọ bụ ọla dị arọ, na mgbakwunye, ọ na -amịkwa isi.
Un ihe nzacha nke atọ, nke ejiri carbon mee, nke a na -akpọ ngọngọ carbon, bụ ọrụ maka ịnọgide na -ekpochapụ nsị site na nzọụkwụ nke abụọ (chlorine, nsị, ọla dị arọ ...) na imecha ísì.
Ụfọdụ ihe nzacha gụnyere akpụkpọ ihu osmosis (nke anyị ga -atụlekwa n'uju na ngalaba ọzọ) nke na -ejigide ihe ọ bụla fọdụrụ n'ime mmiri.
Ma ụfọdụ ihe nzacha gụnyere ịgabiga mmiri aki oyibo eriri iji nye PH kwesịrị ekwesị ma dabara maka azụ.
N'ikpeazụ, dị ka ọ bụ usoro nwayọ nwayọ, ọtụtụ ihe nzacha gụnyere mmiri iji kpokọta mmiri osmosis.
Ogologo oge ole ihe nzacha mmiri osmosis na -adị?
Ọ dabere na onye nrụpụta ọ bụla. Enwere Ha na-atụ aro ka a na-agbanwe ya kwa afọ iri, ebe enwere ndị ọzọ na-atụ aro ka a na-emegharị ya kwa afọ..
Uru dị na ịnweta nzacha osmosis maka akwarium
Dịka ị hụgoro n'isiokwu ahụ, ịnwe nzacha osmosis n'ime akwarium bụ ezigbo echiche. Mana, ọ bụrụ na ị ka nwere obi abụọ, anyị akwadebela depụta na uru kacha pụta ìhè:
Dịka anyị kwuru, mmiri osmotic dị mma ịnwe na akwarium, ebe ị na -ahụ na ọ dị mmiri dị ọcha kpamkpam, ya bụ, na -enweghị ọla ma ọ bụ mineral nke nwere ike imetụta ahụike azụ gị.
N'eziokwu, Enwere ike ịtụle ndị a dị ka ụdị nzacha osmosis, ebe ọ bụ na ha na -ekewa ikuku oxygen ha kwesịrị ịdị ndụ na mmiri wee hapụ adịghị ọcha. Ọ bụ ya mere o ji dị ezigbo mkpa ime ka ọrụ ha dị mfe!
Uru ọzọ nke ịnwe nzacha osmosis bụ na, site na ịhapụ mmiri dị ka ụdị kwaaji oghere, anyị nwere ike itinye mgbakwunye anyị chọrọ maka azụ anyị.
Ọzọkwa, mmiri osmosis na -enye ohere itolite algae na osisi mmiri ma na mmiri mmiri ọhụrụ na mmiri nnu.
N'ikpeazụ, mmiri osmosis nwere ike ịchekwa gị ego mgbe ị na -azụrụ resin ma ọ bụ kemịkal maka akwarium gị.
N'ọnọdụ ndị ka m kwesịrị iji ihe nzacha akwarium osmosis?
Ọ baghị uru ikwu, a na -atụ aro ya nke ukwuu. ọ bụrụ na ị nwere akwarium ma chọọ ịkwalite ndụ azụ gị. Agbanyeghị, ọ dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ:
Mmiri dị na mpaghara gị dịcha mma. Na mgbakwunye na Google, anyị nwere ụzọ ndị ọzọ iji chọpụta, dịka ọmụmaatụ, ịrịọ n'ụlọ ezumezu obodo, ịnweta ngwa nyocha mmiri ma ọ bụ ọbụlagodi n'ụlọ (dịka ọmụmaatụ, ilele ya na ọkụ adịghị anya na ịchọ ntụpọ ma ọ bụ ịhapụ otu iko nwere ngaji shuga ruo awa 24. Ọ bụrụ na mgbe oge ahụ gachara, mmiri adịghị ọcha, ọ naghị adịcha mma).
Azụ gị na -amalite inwe mgbaàmà na -egosi na mmiri anaghị eme ha nke ọma., dị ka ụjọ, mkpasu iwe, ma ọ bụ iku ume ngwa ngwa.
Ihe nzacha osmosis ọ bụ otu ihe nzacha osmosis na -atụgharị?
Mba n'ezie sistemụ osmosis nke ọzọ na -arụ ọrụ ntakịrị, ebe ọ nwere akpụkpọ ahụ na -enyocha nke ọma (ihe ruru oke micron 0,001 n'ọtụtụ oge) mmiri ka nsonaazụ ya wee dị ọcha dịka o kwere mee. A na -enweta nzacha dị mma site na itinye nrụgide na nrụgide osmotic (nke bụ ọdịiche nrụgide na -eme n'akụkụ abụọ nke akpụkpọ ahụ, nke mmiri “dị ọcha” na nke “ruru unyi”), ka mmiri nke na -agafe na nzacha bụ nke ịdị ọcha pụrụ iche.
O doro anya, osmosis tụgharịa bụ ụzọ isi mee ka mmiri dị ọcha dịka o kwere mee, nke bụ ezigbo azịza maka akwarium, n'agbanyeghị na ọ nwere ndọghachi azụ abụọ.
Nke mbu osmosis ntụgharị bụ ịla mmiri n'iyi, na ihe na -abụghị ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anyị na -ekwu. Agbanyeghị na ọ dabere nke ukwuu na akụrụngwa anyị na -ahọrọ, enwere ndị na -ewepụta otu lita mmiri osmosis maka lita itoolu nke mmiri "nkịtị". Ihe, n'aka nke ọzọ, nwere nnukwu mmetụta na ụgwọ mmiri ikpeazụ, n'ezie. N'aka nke ọzọ, enwere ndị na -ekwu maka mkpofu mmiri nke osmosis tụgharịrị, na -akwado ịmegharị mmiri maka ojiji ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, na osisi mmiri.
Nke abuo, akụrụngwa nzacha osmosis dị oke ibu, ebe ọ bụ na ha na -etinyekarị tank ebe mmiri osmosis gafere, ihe a ga -eburu n'uche ma ọ bụrụ na anyị bi n'ime obere ụlọ.
Nke ị na -ahọrọ otu ụdị ma ọ bụ ọzọ nke nzacha Ọ ga -adabere na ebe i bi, mkpa gị yana, n'ezie, nke azụ gị.
Ị nwere ike ịme osmosis maka akwarium a kụrụ?
Dị ka ihe niile dị na ndụ a, azịza ịmara ma ị nwere ike ịme osmosis na akwarium a kụrụ adịghị mfe: ee, ee e. Iji nweta akwarium a kụrụ, ị gaghị enwe ike iji naanị mmiri osmosisEbe ọ bụ na, n'iwepụ adịghị ọcha niile, osmosis na -ewepụkwa ihe ndị dị mkpa ka osisi dị ndụ.
Ya mere, ị ga -achọ ijikọ mmiri mgbata na mmiri osmosis iji nweta ezigbo gburugburu ebe azụ na osisi nwere ike ibikọ. Pasent nke ị ga -eji otu na nke ọzọ ga -adabere n'ọtụtụ ihe, dịka ọmụmaatụ, ịdị mma mmiri dị na mpaghara gị yana ọbụna osisi ị ga -enweta n'ime akwarium. Ha nwedịrị ike ịchọ mkpụrụ pụrụ iche na mgbakwunye ka ha too.
Ihe nyocha osmosis aquarium bụ ụwa, mana ọ bụ n'ezie nnukwu mgbakwunye iji mee ka azụ dị na akwarium nwee ahụike. Anyị nwere olile anya na anyị enyerela gị aka ibido n'isiokwu a na -atọ ụtọ nke ukwuu, nke dị oke mkpa maka azụ anyị. Gwa anyị, kedu ahụmịhe ị nwere na mmiri osmosis? Kedu ihe ị chere maka ntụgharị osmosis? Ị na -akwado otu nzacha maka anyị? Hapụ anyị okwu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Osmosis filter maka akwarium, ihe niile ịchọrọ ịma